XOG: Axmad madoobe oo heshiis la galay shirkad ajnabi ah oo dhoofineysa dhuxusha meeqa lacag ah ayuu hormaris uga qaatay?? – Kismaayo24 News Agency
XOG: Axmad madoobe oo heshiis la galay shirkad ajnabi ah oo dhoofineysa dhuxusha meeqa lacag ah ayuu hormaris uga qaatay??
by Tifaftiraha K24 20th May 2017 040
Warar lagu kalsoon yahay oo la helay ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu wadahal kula jiro shirkad caalami ah.
Axmed Madoobe oo ku sugan magaaladda Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa shirkadaas kala hadlaya arinta dhoofinta dhuxusha oo kamid ah dhaqaalaha ugu waa weyn Soomaaliya.
Shirkadda Star oo ka diiwaan gashan Imaaraadka sidoo kalana taageero ka haysata dowladda Soomaaliya ayaa waxaa iska leh Abduulahi Ali Addoon iyo walaalkiis Abdibasir Ali Addon iyo labo nin oo ganacsato ah oo dowladda gacan saar la leh, Waxaa shirkadda wakiil uga ah Jubbaland Abdi Ali Raag oo la taliye u ah Ahmed Madobe.
Halkaan hoose ka aqriso qodobada, lacagta iyo shaqsiyaadka ka dambeeyo heshiiskaas
1) in shirkadda STAR kaliya ay Dhuxusha dhoofin karto
2) In maamulka Jubbaland loo hormariyo lacag dhan $2,200.000 (labo Milyan iyo labo boqol oo kun) lacagtaas waxaa loo shubay Mudane Ahmed Madoobe ka hor shirkii London.
3) In bil kasta shirkadda STAR ay siiso maamulka Jubbaland $500,000 iyadoo loo marinayo Abdi Ali Raage (La Taliyaha Madaxweynaha Jubbaland) Account uu ku leeyahay magaalada Muqdishu.
4) Waxaa Dhammaan waraaqaha meesha dhuxusha laga keenay lagu qoray in Jabuuti laga keenay dhuxusha.
6) Waxaa waraaqaha Jabuuti (Letter of Origin) ka keenaya Bashiir Dheere, oo isku xira Amniyaadka Imaaraadka oo sahla galinta khaliijka ee dhuxusha oo ay UN mamnuucday isagoo laaluush siiyey carabtii la shaqeyneysay.
7) Waxaa isagana howshaan kaalin weyn ka qaadanaya Shafi Raabi oo 4 goor isaga daba noqday howshaan dalka Imaaraadka Canshuur gaareysa $5.5 la qaata jawaankii dhuxusha ah ee laga dhoofiyo Kismaayo.
9) ilaa hadda waxaa la dhiifiyey 11 doomood oo dhuxul ah.
10) waxaa iyagana heshiiskan qeyb ka ah Al-shabaab oo iyagana qeybtooda meelaha dhuxulaha laga keeni ee duurka ah ka soo qaata jawaankii $2.50 cents.
11) waxaa heshiiskan lagu saxiixay Nairobi oo ay joogaan Abdnasir Ali Addoon, Bashiir Dheere iyi Axmed Madoobe oo howshaan Nairobi iskula xoray.
Heshiiskan waxaa soo xiray Cabdi Cali Raage oo shirkad la ah Axmed Madoobe isla markaasina qoondo weyn ku keh lacagahan
Waxaa howsha laba maalmood ka hor faraha la soo galya UNMG oo iyagu qaabilsan mabnuucidda dhoofinta dhuxusha. UN ayaa hadda baareysa dadka ku lugta leh iyo dowladaha ka dib markii maalmo ka hor labo doonyood lagu qabtay dalka Kuwait oo uu wakiil ka ahaa Bashiir Dheere degen Dubai, waxaad natiijada baaritaankaas la filayaa in dhawaan lasoo saaro.
Maamulka Jubbaland ayaa dadaal ugu jira inuu sharciyeeyo dhoofinta dhuxusha oo haatan la aamisan yahay in si sharci daro ah looga dhoofiyo magaaladda Kismaayo
Akhriso: Xukuumadda soomalia oo amaro deg deg ah soo saartay iyo howlgalka xasilinta oo bilaaban doona……
Ciidamo ka kala tirsan kuwa Maamulka Jubba iyo Dowladda Soomaaliya oo Beledxaawo Dagaal ku dhex maray.